हंगेरीमा विश्व सम्पदा | यात्रा समाचार
हंगेरीमा विश्व विरासत साइटहरू
मारिएला क्यारिल | | हंगेरी, के हेर्ने
हंगेरी यो एउटा सानो देश हुन सक्छ तर यसमा धेरै ठाउँहरू छन् जुन यो युनेस्को हुन योग्यको विचार गर्नुहोस् विश्व सम्पदा। जब यो महामारी बितेर जान्छ र हामी यात्राहरू पुनः अनुसूचित गर्न सक्दछौं, हंगेरी भ्रमण कसरी गर्ने?
युनेस्कोको सूचिमा दाखमद्य खेती गर्ने क्षेत्र, पुरानो अभेय, जादुगरी चराउने मैदानहरू, बुडापेस्ट, एक क्रिश्चियन नेक्रोपोलिस र पृथ्वीमा गाडिएका ग्रोटोहरू परी कथा जस्तो देखिन्छन्।
हाम्रो यात्रा सुरु गरौं हंगेरीको राजधानी, राम्रो बुडापेस्ट। यस शहरको सेल्टिक र पछि रोमन उत्पत्ति भएको छ, जुन XNUMXth औं शताब्दीमा हंगेरीहरूले ओगटेको छ। त्यसपछि आयो मंगोल र ओटोम्यान, क्रान्तिहरू, सोभियत ... सबैले आफ्नो छाप छोडे।
बुडापेस्टमा युनेस्को सूचीको कुरा गर्दा, वर्ल्ड हेरिटेज भन्ने क्षेत्र मार्गरेट ब्रिजबाट लिबर्टी ब्रिजसम्म चल्छ। यहाँ के छ बुडा क्यासल, डेन्यूब र एन्ड्रीस्सी एवेन्यूको किनारको भ्रमण गर्नुहोस्। तीनै जना डान्यूब तटीय पोष्टकार्डमा समावेश छन्।
El बुडा महल o बुदाई भोर, ऐतिहासिक शाही घर हो। एक छ ढिलो गोथिक शैली र यो १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो, पहाडमा त्यो आज मध्ययुगीन छिमेकमा छ जुन बहुमूल्य सम्पदाको अंश हो।
दुर्ग सम्म तपाईं फनिकुलरमा पुग्नुहुन्छयस समयमा सेवा निलम्बित गरिएको छ तर अर्को महिनामा फेरि सुरू हुनेछ। भवनले सांस्कृतिक समारोह पूरा गर्दछ र समयको साथमा धेरै परिवर्तनहरू भइरहेको छ। जबकि त्यहाँ मध्यकालीन विवरणहरू छन् तपाईंको खुट्टामा गढीसत्य यो छ कि बारोक शैलीका निर्माणहरू प्रशस्त छन्। पुरानो मध्ययुगीन कोठाको अस्तित्वलाई रेखांकित गर्नु आवश्यक छ जस मार्फत वाइन उत्पादकहरूले उनीहरूको उत्पादन बेच्थे जुन अहिलेसम्म पुगेको छ।
La म्याटास गिर्जाघर, शहर को प्रतीक, यो छिमेकको मुटुमा छ। बाट मिति तेह्रौं शताब्दी र यो पनि तुर्कको समयमा मस्जिद थियो। आज यसको नव-गोथिक शैली छ, तर यो १ th औं शताब्दीमा मात्र अपनाइएको थियो। यससँग दुई टावरहरू छन् विभिन्न हाइट र राम्रा टाइलहरू। सब भन्दा माथिल्लो धरहरा भनेको निश्चित रूपमा हो जुन उनीहरूलाई मटास टावर भनिन्छ र तपाई यसको शीर्षमा सर्पिल सिँढीबाट माथि जान सक्नुहुन्छ।
चर्च भित्र थुप्रै कला, सिरामिक र दाग कांचका अति उत्तम कार्यहरू छन्। यो बुडापेस्टमा धेरै भ्रमण गरिएको ठाउँ हो त्यसैले तपाईं यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्न। र यदि तपाईं हिड्न जान चाहानुहुन्छ, किनकि पहाडहरूमा केही समयका लागि हराउन गुफाहरू र सुरुnelहरू हुन्छन्।
सूचीमा हामी थप्छौं डान्यूब तट। यहाँ मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईं नदीको किनारमा हिंड्नुहोस् र जानुहोस् Dune-korzó, L partncid ब्रिज र इसाबेल ब्रिजको बीचमा अवस्थित एक भाग। यो जहाँ छ होलोकास्ट स्मारक: महिला, पुरुष र बच्चाहरूको लागि pairs० जोडी जुत्ता जुन पीडितहरूलाई सम्झन्छन्, जसले प्रतिरोध गर्थे, यहूदी शहीद थिए।
अन्त्यमा, बुडापेस्टमा तपाईले गर्नु पर्छ एन्ड्रिसी एवेन्यू तल टहल। एभिन्यू १ th औं शताब्दीको हो, यूरोपभरि शहरी सुधारहरूको शताब्दी। पेरिस द्वारा प्रेरित, यसको डिजाइनर, काउन्ट Gyula Andrássy, आकारaसुरुचिपूर्ण र केही हदसम्म pompous सडक, बगैचा र पसलहरु संग काठको पेभरहरु संग पहिले प्रशस्त। यहाँ राज्य ओपेरा, पेरिस डिपार्टमेन्ट स्टोर र हप फेरेन्क ओरिएंटल संग्रहालय छ।
सडक तीन भागहरु मा विभाजित छ र तल युरोपियन महादेशमा सब भन्दा पुरानो मेट्रो चलाउँछ सुरुचिपूर्ण स्टेशनहरू जुन तपाईंलाई पनि जान्नुपर्दछ। एक पैदल यात्रा, केहि शपिंग, कफि र सबवेमा सवारी र तपाईं दिईएको पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
बुडापेस्ट छोडेर हामी यात्रा गर्यौं हंगेरी वाइन उत्पादक क्षेत्र, तोकाज। यहाँ परिदृश्य संस्कृति पूरा। टोकज देशको उत्तरपूर्वीमा, ज़िम्प्लान पर्वत श्रृंखलाको फेदमा छ, टिस्जा र बोड्रोग नदीको संगममा। दाखमद्य क्षेत्रको पूरा नाम तोकज-हेग्याजाजाँ हो र यसले १ 00 मा आकार लियो र २ to वटा बस्तीलाई समर्पण गरियो। ज्वालामुखीको माटो, मौसम, यसले सबै मदिरालाई ठूलो बनाउन सहयोग गर्दछ।
यो कस्तो प्रकारको मद्य हो? यहाँ एक धेरै उत्तम मिठाई मद्य र विशिष्ट। उनीहरू भन्छन कि लुइस XV ले उसलाई बोलायो «राजा रक्सी«। राम्रो कुरा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ दाखबारी, वाइनरी हेर्नुहोस्हो, स्वाद लिनुहोस् वा लक्जरी डिनरहरूको लागि भुक्तान गर्नुहोस् र तपाईंसँग स्मृति चिन्ह लिनुहोस्।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ छ Pécs को पुरानो ईसाई नेक्रोपोलिस, प्राचीन Sopianae। यो रोमन उत्पत्ति र दोस्रो शताब्दी देखि मिति छ। यो चौथो शताब्दीमा एक महत्त्वपूर्ण प्रान्तीय राजधानी थियो र नेक्रोपोलिस लेट रोमन र प्रारम्भिक ईसाई कालको मितिबाट आएको थियो। त्यहाँ छन् सयौं चिहानहरू, चैपलहरू र विशाल क्रिप्टहरू। यदि तपाईंलाई कला र आर्किटेक्चर मनपर्दछ भने, यो चाखलाग्दो ठाउँ हो किनकि यो युरोपेली कब्रिस्तान हो जहाँ मूल अवधि सजावटको साथ भित्ताहरूको साथ भवनहरूको एक रोचक संख्या संरक्षित छ।
हंगेरीको अर्को विश्व सम्पदा साइट हो पन्नोहल्मा अबे, उत्तरी हंगेरी, Pannon क्षेत्रमा। यो महान सांस्कृतिक मूल्य को एक पुरातन अबे हो। यसको स्थापना बेनेडिक्टिन भिक्षुहरूले 996 XNUMX मा गरेका थिए सान मार्टिनको सम्मानमा। योसँग सुन्दर बगैचा, एक जडिबुटी, दाखबारी, दाख पेटी, एक चिया कोठा र रेस्टुरेन्ट र एक होस्टेल छ। मठवासी समुदाय अझै लागू छ।
अन्तमा, कार्ट मूलको Aggtelek गुफाहरू। क्षेत्र एक paleontological, भूवैज्ञानिक र जैविक दृष्टिकोण को बाट धेरै धनी छ र हंगेरी र स्लोभेनिया बीच फैलियो। को ट्रेकिंग यो दिनको क्रम हो र सबैभन्दा कठिन पैदल यात्रा सजिलोसँग सात घण्टा सम्म चल्दछ। तर गुफा लागि, को बारादला गुफा यो २० लाख भन्दा बढी वर्ष पुरानो र २ 26 किलोमिटर लामो छ। यो विशाल, पूर्ण छ stalagmitesसबै भन्दा लोकप्रिय सासू-ससुराको जिब्रो, हिल अफ द जियान्ट्स, हल अफ कॉलम वा ड्र्यागन हेड हो, यद्यपि यो केवल एक मात्र होइन, त्यहाँ १२०० भन्दा बढी गुफाहरू छन्।
होलोको पुरानो शहर हो, देश को उत्तर मा। राम्रो छ ग्रामीण मध्यकालीन, सेता पर्खाल संग, पोर्च, एक विमान मा व्यवस्थित गरी काठको टावर चर्च जान्छ। त्यहाँ houses 67 घरहरू छन् जुन विरासत छन्, अझै बसोबास गरिरहेका छन्, या त स muse्ग्रहालयहरुमा रूपान्तरण गरियो वा हस्तकला कार्यशालाहरु जसले पर्यटकलाई प्राप्त गर्दछ। यो एक लोकक स्थान हो, यसको आफ्नै बोली, आफ्नै खाना र आफ्नै कपडा।
र filially, यो Hortobagy क्षेत्र, विशाल घाँस मैदान को भूमि। गाईवस्तुहरूले यहाँ शान्तपूर्वक चरिरहेका छन्, त्यहाँ घोडसवारहरू, भेडाहरू, परम्परागत ईन्हरू छन् कि रात बिताउन र खाने र खानेकुराको अथाह दृश्यको आनन्द लिन। युरोपमा सबै भन्दा ठूलो घाँस मैदान। यदि तपाइँ शरद inतुमा जानुहुन्छ भने, क्रेन, बगाल र आकाश पार गर्ने बगैंचाको प्रवास नगुमाउनु नै उत्तम हुन्छ।
यी हुन् हंगेरी विश्व सम्पदा। सुन्दर।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » हंगेरी » हंगेरीमा विश्व विरासत साइटहरू
सार्डिनियामा के यात्रा गर्ने
युरोपमा बच्चाहरूसँग यात्रा गर्दै